Isbeddellada Midabbada Gogoshaha ah – Talooyin ku Saabsan Doorashada rooga ugu wanaagsan ee guriga - Carpet Color Trends
Home » Isbeddellada Midabbada Gogoshaha ah – Talooyin ku Saabsan Doorashada rooga ugu wanaagsan ee guriga
Isbeddellada Midabbada Gogoshaha ah – Talooyin ku Saabsan Doorashada rooga ugu wanaagsan ee guriga
Roogga rooga ayaa ka mid ah waxyaabaha qurxinta ee had iyo jeer ku yaal guri kasta. Marka xulashadu saxan tahay, marka hore tixgeli talooyinka ku saabsan doorashada rooga ugu wanaagsan ee hoosta. Hagaag, ma ogtahay in ku dhawaad ​​guri kasta uu isticmaalo rooga?
Hadda, waad fiirsan kartaa jawiga qolka oo ka duwanaan doona rooga. Waxay sidoo kale kuxirantahay midabka iyo damaca rooga la doortay. Waxaa soo baxday inaad qurxin karto guriga si fudud adoo isticmaalaya keliya rooga kala duwan. Ma waxaad dooneysaa inaad rooga u hesho nooca ugu fiican uguna saxsan ee guriga? Aynu eegno talooyin ku saabsan xulashada rooga hoosta.
Midabada rooga ayaa isweydaarsanaya fikradaha adiga
Maxaad carbis u taqaanaa? Sida muuqata, waxaa jira shan qalab rooga, waad ogtahay. Mararka qaarkood waxaan iibsanaa roogayaal sida aan u rabno annaga oo aan runtii ogayn nooca. Halkan waxaa ah shan nooc oo kaarbeeryada ah iyo Isbeddellada Midabbada Kaarboon:
Midabada dhalaalaya ee dhexdhexaadka ah waxay keenaan muuqaalka iftiinka waxayna fududdahay in lagu qaso qolka
Midabada mugdiga ah waxay soo bandhigaan aragti culus laakiin qatar badan ayey ku leeyihiin qolka
Midabyo yaab leh
Midabada layaabka leh sida jaalaha iyo casaanka waxay u keenaan qol aad u xamaasad badan, farxad iyo dhexdhexaad ah
Midabka dambas ayaa ku siin kara tamar qurux badan meel kasta
Buluuga waxay siisaa dareen ah is-dejin iyo qalbi qaboojin
Midabka guduudan wuxuu calaamad u yahay niyad-jabka, tamarta iyo rabitaanka
Cilladaha cagaaran ee dabiiciga ahi waxay ku siin karaan jawi qabow, nasasho iyo wada noolaansho fududayn kara maskaxda
Midab cad ayaa soo bandhigaya aragtida nadiifka ah, cad oo saafi ah
Midabka madow wuxuu ku habboon yahay inuu soo bandhigo aragtida aragtida, qoto-dheer iyo wax yar oo qarsoon
Isbeddelka Midabada rooga iyo Noocyada ku habboon Qolkaaga
Saamaynta rooga ee qolka ma aha oo keliya shaqadiisa ama qurxin ahaan. Xulashadaas midabka rooga saxda ah ayaa aad muhiim ugu ah go’aaminta jawiga iyo shaqeynta ka dib markii la rakibo. Sababta oo ah midabka roogaani wuxuu awoodaa inuu ku noolaado jawiga oo uu qolka ku darsado qiimaha qurxinta.
# 1: Nooca rooga Wool
Xaqiiqdi waad ku raacsan tahay in qayb ka mid ah ay tahay sheyga ugu raaxada badan. Bal qiyaas uun inaad ku jiifsato rooga dhogorta laga sameeyay. Hoogay, way adkaan lahayd. Raaxo ahaanteed, sida rooga dhogorta leh runti waa qaali. In kasta oo qaali ah, haddana waxaa jira xoogaa faa’iidooyin:
Aad ugu fiican in la isticmaalo
Sidee loo nadiifiyaa rooga dhogorta leh? Si fudud, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad isticmaasho nadiifiyaha faakiyuumka ama nadiifinta qallalan.
# 2: Noocyada Kaarbiyada Xariir ah
Yaa aan aqoon xariir? Hal shay ayaa dhab ahaan ku siin doona raaxo dheeraad ah marka la barbar dhigo dhogorta. Qoraalkeeda aadka u jilicsan wuxuu ka dhigayaa xariir aad u raaxo badan. Kadib, sidee loo nadiifiyaa rooga xarrago leh? Waxay lamid tahay nadiifinta rooga dhogorta leh, rooga xariir ayaa sidoo kale lagu nadiifiyaa iyadoo la isticmaalayo qalabka wax lagu nadiifiyo
# 3: Noocyada Qalabka Kartoonada polypropylene
Ma doorbideysaa roogagga isku-darka? Hadday saas tahay, waa inaad doorataa nooca polypropylene ama rooga PP. In kasta oo laga sameeyay walxaha isku-darka, rooga noocan ah wuxuu leeyahay dhareer jilicsan. Maaddaama tan laga sameeyay alaab isku-dhafan, dabcan qiimaha waa mid la awoodi karo. Qiimo ayaa jira, alaab tayo leh ayaa jirta.
Tani waxay sidoo kale quseysaa roogagga polypropylene. Qiimaha waa mid aad u jaban in lagu sameeyo rooga noocaan ah wuxuu leeyahay dhowr garsoor. Halkaan waxaad ka aadeysaa cilladaha:
Midabku si dhakhso ah ayuu u sii xumaanayaa
Sariir rooga si fudud ayuu u baxaa
Gaar ahaan maadadan rooga, waad ku dhaqi kartaa adoo isticmaalaya biyo.
# 4: Noocyada Kaarbooyinka Nylon
Rooga noocan ah wuxuu la mid yahay roogaga nooca polypropylene. Isku mid ahaantu waxay kujiran tahay rooga rooga. Si kastaba ha noqotee, walxaha nafaqadu waa hal heer oo ka sarreeya maadada ‘polypropylene’. Tan waxaa laga dareemi karaa shey u eg dhogor.
Hagaag, rooga nuuradda noocan ah ayaa kugu habboonaan doona adiga oo jecel jawiga dhalaalaya. Sabab? Badanaa, nooca rooga nylonku wuxuu leeyahay midabyo cajiib leh. Haysashada isla alaabada nooca rooga, roogagga nylon sidoo kale waa lagu maydhin karaa iyadoo la adeegsanayo biyo.
# 5: Noocyada Kaarbiyada Sisal
Maaddadan oo keliya ayaa laga yaabaa inayna weli aqoon dadka badankood. Waa maxay walaxda sisal? Waxaa soo baxday in sida magaca macnaheedu yahay, halkan rooga uu ka yimaado warshad la yiraahdo sisal. Maaddada dabiiciga ah ayaa rooga qafiifka ah ka dhigaysa mid hodan ah. Dabcan, tani waxay ka dhigeysaa rooga sisalku mid aad u amaan badan in la isticmaalo.
Sidee daaweyntu tahay?
Weligaa ha ku maydhin rooga sicir bararka adiga oo isticmaalaya biyo
Si fudud u nadiifi rooga adoo isticmaalaya qalabka wax lagu nadiifiyo
Hadda taasi waa shan nooc oo rooga rooga ah
# 6: Noocyada rooga oo dib u soo celiya qoryaha
Rumayso ama ha rumaysan, farsamada casriga ah ayaa sidoo kale gashay rooga. Caddeyntu waa, hadda waxaa jira roog u eg sagxadda. Haa, muuqaalka roogaani wuxuu u eg yahay qoryo, marballaad, qaarna waa sida dhoobada. Haddii aad u isticmaashid rooga sidan oo kale ah, waxaa fiican inaad iskugu geyso isticmaalka muraayadaha waaween gees walba oo qolka ah.
Sabab? Jiritaanka muraayad waxay carqalad ku noqon kartaa meesha bannaan ee jirta. Qolka wuxuu u ekaan doonaa meel ballaadhan oo rooga ayaa soo bixi doona waxbadan.
Marka, waa waxwalboo ku saabsan Isbeddelka Midabyada Kaarboonaanta adiga. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkani waxtar kuu leeyahay adiga. Waxaad ku bilaabi kartaa sahminta fikradaha rooga oo dhan adiga oo ugu jeceshahay Isbeddelka midabyada rooga. Marka, ku raaxayso qurxinta guriga aad jeceshahay adigoo dooranaya rooga saxda ah!
Kitchen Color Schemes With White Ca
White Color Walls Go With Grey Carp
Golden Brown Color Paint Bed Room
Wall Colors For Beige Tile Of Bathr